BlogBy codecafe Septambra 5, 2020
Manaporofo fa ny Search Engine Optimization no fitaovana mahomby indrindra ho an'ny orinasa eo an-toerana. Ity bilaogy manaraka ity dia misy angona tena izy avy amin'ny mpanjifa isenselogic.com momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra SEO ho an'ny dispensary Marijuana Recreational any an-toerana. Azo ampiharina amin'ny orinasa eo an-toerana ireo angona ireo, na orinasa mpanao lalàna ianao,…
Mpanoratra: Agent GPFN Daty: 3/24/2020 Natokana ho an'i: Google [Mark Lindbitch The Grand Wizard] Ity kofehy ity dia mifototra amin'ny fahana twitter an'i Dr. Russel McGregor @killaudeepstate navoaka manodidina ny 3-15-2020 Raha hitanao fa mampahafantatra ity vaovao ity azafady ZARAO! Misaotra Corona Psy-Op Fanavaozana 7/14/2020 Corona Psy-Op Fanavaozana 7/10/2020 Miala tsiny fa efa ela aho no nandeha, teo…
BlogBy codecafe Febroary 25, 2020 Leave a comment
Mark Lindquist ve no mpampanoa lalàna mpanao kolikoly indrindra amin'ny tantaran'ny Etazonia? Mpanoratra: Agent GPFN Mpampanoa lalàna taloha Mark Lindquist toa tsy dia nahalala firy momba ny etika miasa. Raha mbola nitantana ny biraon'ny mpampanoa lalàna tany amin'ny faritany Pierce, Washington izy, dia voalaza fa nanararaotra ny fahefany ary nanao fihetsika tsy mendrika tamin'ny olom-pirenena ihany fa ny mpikambana ao aminy…
Blog, Blog fikarohanaBy codecafe Janoary 29, 2020 27 Comments
Mark Lindquist Ilay Magicien Grand ao amin'ny faritany Pierce. Vaovao farany 7/26/2020 Mark Lindquist Ilay Magicien Lehibe sy ilay FANDAMINANA FAKE 19 Pandemie Ny bilaogiko vaovao dia nafindra teto: https://redemperorcbd.com/blog/ Efa nolazaiko taminareo talohan'ny nametrahako ny olako, dia hitako fa hitako ny nanimba ny rafitra tamin'ny 2012, maro aminareo no manomboka…
BlogBy codecafe Novambra 22, 2019 Leave a comment
MARK ZUCKERBERG dia mpamitaka ampiasain'ny CIA Source Source Link. https://aim4truth.org/2019/06/13/facebook-insider-confesses-all/ Ho an'ny mpampiasa Facebook rehetra, Mark Zuckerberg, ary isika rehetra izay teo am-piandohana, dia mandainga aminao ary mampiasa ny fiainanao manokana toy ny fanandramana fehezin'ny governemanta amin'ny fanasan-doha sy fifehezana saina - rafitra fiadiana mitam-piadiana (CIA…
William Cooper sy ny mpitsikilo
BlogBy codecafe Oktobra 20, 2019 Leave a comment
Fampidirana I William Cooper dia manamboninahitry ny tafika an-dranomasina ary mpitsikilo ny teknolojia UFO mandra-pahafatin'ny mpampihatra lalàna tao an-tranony tamin'ny taona 1991. Ankehitriny alohan'ny handehanantsika lavitra dia mila milaza aminao aho fa iray amin'ireo mpino lehibe indrindra amin'ny vahiny aho, ny UFO ary izay antsoin'ny hafa ho teôlôjiana fikomiana.…
Ny tena fahaiza-manaon'ny NSA
Blog fikarohana, BlogBy codecafe Oktobra 12, 2019 2 Comments
Manaraka ahy ao amin'ny Twitter ianao @dispensayexch raha te hahazo bebe kokoa amin'izany INTEL tsara izany. Miarahaba anao, ny anarako dia James Baines IV tompon'ny Isenselogic.com. Nanjary liana tamin'ny fahaizan'ny NSA aho taorian'ny fanambarana nataon'i Edward Snowden taorian'ny nanambarany betsaka ny fahaizan'izy ireo ara-teknika tamin'ny taona 2013. Arakaraka ny fikarohana nataoko…
Mpamitaka tsara indrindra an'i Aaron Pelley Seattle
Blog fikarohanaBy codecafe Jolay 28, 2019 Leave a comment
Betsaka ny olona manontany tena hoe maninona aho no miantso ilay mpisintaka tsara indrindra an'ny mpisolovava Aaron Pelley ao Seattle. Hitanao rehefa hitako fa nanangana ahy ho meloka noho ny fitsarana marijuana sandoka nataoko izy. Nanafika fanafihana mialoha azy sy ny ambiny amin'ireo mpiray tsikombakomba na izay tiako iantsoana SNITCHES tamin'ny alàlan'ny fampiasana…
911 Inona no Tena Nitranga Nataon'ny Agent Freak Nasty
Blog fikarohanaBy codecafe Jolay 5, 2019 4 Comments
911 Inona no tena zava-niseho natolotry ny Agent Freak Nasty Update 3/26/2020 Dr, Pieczenick izay JEWISH dia namaky ny fandraisana an-tanana ny Mossad ao amin'ny boky 911 avy amin'ny Dr. Piecznicks boky vaovao momba ny fomba nanidiran'ny CIA ny Pentagon handrindrana ny fanafihana 911 amin'ny Mossad Pieczenik dia lefitry ny sekreteram-panjakana lefitra notarihin'i Henry Kissinger https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Pieczenik Ny antontan-taratasy voalohany…
Fitifirana any Las Vegas
Blog fikarohanaBy codecafe Jolay 5, 2019 3 Comments
Fitifirana any Las Vegas, Inona no Tena Nitranga Nataon'ny Agent Freak Nasty Raha mampiasa Desktop ianao, ampidino ny totozyo amin'ny sary sasantsasany mba hahitana CLUES bebe kokoa…. sehatra media sosialy hafa mankany BYPASS ny Hostile Media manandrana sivana ity…